संविधान छाडेर पाँच करोडको सपना | चितवन पोष्ट दैनिक
संविधान छाडेर पाँच करोडको सपना
तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेर जनतालाई निराश बनाइरहेका सभासद्हरुको ध्यान यतिबेला आगामी बजेटमा केन्द्रित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ का लागि बजेट बनाउन गृहकार्य थालेपछि सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम वृद्धि गर्न एउटै स्वर बनाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित एक करोड रूपैयाँ नै परिणाममुखी हुन नसकिरहेका बेला सभासद्हरुले आफ्नै नेतृत्वमा खर्च गर्न पाउने गरी रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिनु लाजमर्दो कुरा हो । यस्तो दबाब दिनेमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धन पक्षका सभासद् प्रमुख देखिए पनि पाँच करोड विनियोजनको सवालमा सबैको एकमत
छ । सभासद्को प्रमुख जिम्मेवारी समयमै जनमुखी संविधान निर्माण गर्नु हो । तर, संविधान निर्माणको अभिभारालाई थाती राखेर सडक, सिंचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता विकास निर्माणका लागि बजेट माग्नु शोभनीय विषय होइन ।
सभासद्हरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक विकासका लागि पाँच करोड विकास बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिएको भए त्यो स्वाभाविक हुनेथियो । तर, सांसद् विकास कोषबाटै खर्च गर्ने गरी पाँच करोड माग्नुको एकमात्र उद्देश्य अनियमितता गर्न खोज्नु नै
हो । राज्यकोषको रकम कसरी खर्च गर्ने भनेर कानुन निर्माण गर्ने सभासद्हरुले सोच्ने विषय होइन । सभासद्हरुले नै रकम मागेर खर्च गर्दा त्यसको निगरानी कुन निकायले गर्ने ? आफैँले गरेको कोषको रकमको भ्रष्टाचार भए आवाज कसले उठाउने ? भ्रष्टाचार हुँदा पनि जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो दुरूपयोग अरु के हुनसक्छ ? यो गम्भीर सवाल हो ।
कोषमा रकम दिनु भनेको सभासद्हरुलाई आफ्नो तजविजमा प्रयोग गर्न पाउने गरी खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु हो । राज्यका तीन अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिहरुको सभा हो । व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख कार्य भनेकै जनताको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माता (विधायक) र निगरानी गर्नु हो । यी मुख्य तीन कार्यले व्यवस्थापिका संसद्को मुख्य उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, अहिले सभासद्हरुले आफूलाई कार्यपालिका सम्झँदै बजेट माग गरेर आफ्नै तजविजमा खर्च गर्न पाउनु पर्ने अडान राख्नु अनैतिक हो । यसले सभासद्हरु आफ्नो कर्तव्यबाट कति च्युत भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
सांसद् विकास कोषको रकम १० लाख रहँदासमेत दुरूपयोग भइरहेको जनगुनासो आएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको एक करोड रूपैयाँ पनि सदुपयोग नभएका बेला पाँच करोड विनियोजन गर्दा के होला ? यो सामान्य जनताले पनि विश्लेषण गर्नसक्ने कुरा हो । एकाध क्षेत्रबाहेक अहिले पनि अधिकांश क्षेत्रमा विकास बजेट नै पाँच करोड पुग्न नसकेको स्थिति छ । अनुगमन निकायले नै बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो । कोषको अधिकांश रकम सामुदायिक भवन, चौतारा, मन्दिर, गुम्बा, पाटीपौवा निर्माणमा खर्च भएका छन् । सभासद्ले पाँच करोड माग्नुको उद्देश्य भनेको कार्यकर्तालाई ठेकेदार बनाउनु, आफन्तलाई पोस्नु र निर्वाचनको खर्च उठाउनु नै हो । सभासद्ले देखेको यस्तो सपना पूरा भएको खण्डमा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार भोग्नुपर्ने मात्र होइन, विकास बजेटसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।